Ny androaniko | Aprily 2008
[Ankapobeny ] 29 Aprily, 2008 20:58
O ry kdaombaramita a !
Ity paositra alefako androany ity dia atolotro manokana ho anao :
- izay nampiasa "Lala sy Noro", sy "méthode boscher", sy "Isambilo", sy "Takelaka notsongaina" tamin'ny fotoana nampiasako izany raha ny fandinihako azy ;
- nihira sy nikalo ny "Vola sy Noro", sy ny "Vahiné", sy ny "Troupah", sy ny "Ventson'Androy", sy ny "Il était une fois", sy ny "C. Jérome"... sy nampirindra hetsika tamin'ny feon-kiran'i "Freddy Ranarison" tamiko (sy lalasoa koa angamba) fa mino mihintsy aho ;
- niray andiany tamiko tamin'ny Fanompoam-pirenena ivelan'ny tafika tao amin'ny "Régiment d'Amour, d'Amitié et d'Allégresse" tetsy Betongolo raha nitondra ny anarana "Fanarenana" ireo nahavita ny dingana farany tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa tamin'ny taona 1985, rehefa avy nijery isika roa - 23 taona aty aoriana - ka nahatsikaritra fa iray tobim-piofanana ara-miaramila,
koa indro tohin'ilay paositra nalefanao, atolotra ihany koa ho an'ireto tanora marobe eto izay mety mahay ny feony fa tsy mahalala ny lohatenin'ilay hira, na manontany tena hoe Razafindrahety izany ve tsy sekoly teny amin'ny lahaute teny ?
Fa ny zavatra mba mandreraka amin'ity serasera ity kosa dia ity : tsy hamantaran-dahy sy vavy ! tsss.
Hay ve i kdaombaramita sipa fa tsy bandy e
[Ankapobeny ] 24 Aprily, 2008 10:08
"Antandroy" arak'i Pasitera Tolotra.
Mbola tsy miala any atsimotsimo any isika, saingy aleo i Pasitera Tolotra - izay mpandalina indrindra momba ny finoana jiosy - no hanazava azy. Ny tena moa tsy mana-talenta momba izany ka asa raha manan-kolazaina ny hafa fa fanazavana vaovao amiko izy ity. Nefa dia tombom-pahalalana daholo ihany koa.
[Lasalasa fisainana ] 18 Aprily, 2008 20:51
Fanontaniana napetraky ny tao an-tranonay foana ny hoe : "taiza ho aiza tamin'ny fiainako no nitiavako an' Androy ?"
Tsy hitako ny valiny. Ny toetrako angamba mifanaraka tsara amin'ny hangazan'ny tany sy ny fanakoakon' ny beko antandroy.
Efa voalazako fony voatagy aho fa isan'ny mba nampalahelo ahy tamin'ny fiainako ny tsy nahafahako nanohy hatramin'ny farany ny fianarana teny amin'ny Anjerimanontolo (sampana tenin-drainiboto), nefa dia mba fikasako tamin'izany fa ny lohahevitra hotohanako amin'ny famaranana ny fianarana dia ny hoe "Comparaison de la langue allemande et le dialecte antandroy".
Indro misy beko antandroy ho an'izay mba liana hahalala misimisy kokoa an'ity faritra atsimon'ny Nosintsika ity, tanànan'ny roy, maniry betsaka any amin'io faritra io .
Fomba fiteny any Androy ny hoe : "aty Androy, ny fiainana toy ny fihinanan-draketa, tsy eritreretina ny tsilony".
[Fanajana ] 15 Aprily, 2008 07:19
Mandria am-piadanana, Romule !
Nodimandry omaly 14 avrily izy (eo ankavia amin'ny sary) .
Ity hira ity isan'ny sangan'asany farany niaraka tamin'ny Gabhy sy Salomon.
Mirary fiononana ho an'ny fianakaviany.
[Lalao ] 14 Aprily, 2008 08:23
Enti-mody : "Aza ampijaliana ny tenintsika" - and. 3.
Fanoratra ny teny avy amin'ny teny vahiny sasantsasany.
Ireo teny vahiny gasina dia tokony hampanarahina ny fomban-teny malagasy ; koa amin'izany tsy tokony hosoratana hoe ministra fa minisitra, tsy rejistra fa rejisitra. Samy azo soratana kosa ny kristianina sy kristiana.
Ny fiafaran'ny teny "-ie" amin'ny teny frantsay raha gasina dia tsy tokony ho -y fa -ia: jeografia, poezia, litania...
(nalaina tanaty ny boky "Isambilo" T4 nosoratan'ingahy Regis Rajemison Raolison ihany ity lesona ity, ary tena ilaintsika mpandika vaovao toa ny any amin'ny Global voice, ny wikipédia sns.)